Ku biir Kooxda Hodges U! Arag Fursadahayaga Shaqaalaynta
Diyaar ma u tahay inaad ka mid noqoto heerka xiga ee tacliinta sare?
Jaamacadda Hodges, waxaa naga go'an inaan shaqaaleyno kaliya macallimiinta iyo shaqaalaha ugu fiican si aan uga taageerno ardaydeena waddooyinka ay u marayaan guusha. Haddii aad jeceshahay inaad ka caawiso dadka kale inay gaaraan himilooyinkooda, markaa waxaan kaa dooneynaa kooxdayada. Haddii tani kula mid tahay, dooro mid ka mid ah fursadahayaga shaqo oo soo gudbi shahaadadaada.
Noqo Qof Dhiirigalin ah. Ku soo biir kooxda jaamacadda Hodges maanta!
Ku saabsan Hodges Employment
Wadahadal lala yeeshay Gloria Wrenn, Agaasimaha Shaqaalaha:
Waa maxay waxa ugufiican ee laga shaqeeyo Jaamacada Hodges?
Saddexda sababood ee ugu sarreeya waxay noqon doonaan:
Dadka halkan ka shaqeeya. Xaragada waayo qaar badani waa qoys labaad, weligayna ma arkin dad badan oo sidan oo kale u hammuun qaba oo si adag u wada shaqeeya ujeeddada guud ee ah in Hodges laga dhigo jaamacadda ugu fiican ma aha oo keliya SW Florida, laakiin meel kasta.
Waxaan sidoo kale leenahay shaqaale aad u kala duwan oo loo dhan yahay sidoo kale - qof walba oo halkan jooga wuxuu ka yimid meel kale - waxaana u maleynayaa in taas darteed ay shaqaaluhu u aqbalayaan dad ka yimid dhaqammo kale ama asal ahaan.
Waxaan nahay urur hal abuur leh oo leh sida aan ardayda ugu soo bandhigno casharo, waxaanna noqonay hay'ad aad u jajaban oo si dhaqso leh u beddeli karta baahida jaamacadda ama tacliinta sare. ”
Maxay yihiin qaar ka mid ah faa'iidooyinka shaqo ee Hodges U?
“Jaamacadda Hodges waxay ku taalaa xarun qurux badan oo qoraxdu ku badan tahay Fort Myers, Florida, waa tubaako la'aan, waxayna kasbatay Goobta Shaqada ee Blue Zone Magacaabid, (hay'addii ugu horreysay ee tacliinta sare ka sameysa gobolka) taas oo dhiirrigelisa caadooyinka caafimaadka leh. Intaas waxaa sii dheer, dhammaan jagooyinka waqtiga-buuxa waxaa ka mid ah xirmo waxtar badan oo deeq ah oo ay ku jiri karaan faa'iidooyinka caafimaadka, caymiska caymiska, iyo ka-dhaafitaanka waxbarashada.
Khibradaha Kuliyadaha iyo Shaqaalaha
Waa maxay waxa ugu fiican ee ka shaqeeya halkan?
“Daawashada nolosha ardayda ayaa isbadalay. Kaliya waxay ka dhigeysaa wax walba oo aan ku sameeyo halkan mid macno leh, ” Teresa Araque, Sarkaalka Suuqgeynta / Sarkaalka Macluumaadka Dadweynaha
“Qoyska. Waxaan leeyahay qoyskeyga "gurigeyga" iyo qoyskeyga "shaqada" mana aanan sameyn karin midkood la'aan. Waxaan leenahay maalmo waalan sida urur kasta oo kale, laakiin dhamaadka maalinta waxa aan halkaan ku sameyno runti waa mid gaar ah. Dadku waxay halkan u yimaadeen inay beddelaan dariiqa caafimaad ee qoyskooda oo dhan waana heli karnaa caawimaad, ” Erica Vogt, Madaxweyne Ku-Xigeenka Fulinta ee Hawlgallada Maamulka
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan ka shaqeynta Jaamacadda Hodges waa dhaqanka dhow ee is garab-taagga iyo taageerada shaqaalaha. Iyagu waa kuwa ugu dadaalka badan uguna xirfadda badan kooxdii aan waligay sharaf u yeesho inaan la shaqeeyo, ” John D. Meyer, DBA, Madaxweynaha
Jaamacadda Hodges waa shaqo-bixiye loo wada siman yahay oo kuma takoorto iyada oo ku saleysan jinsiyad, midab, diin, jinsi, nooca galmada, dhalashada waddanka, da'da, naafonimada, ama astaamo kasta oo kale oo ilaaliya oo sharciga ku hoos jira marka ay shaqeyso. Dhammaan dalabyada shaqaalaynta waxaa shardi u ah in si guul leh loo dhammaystiro baaritaanka taariikhda iyo baaritaanka daroogada.
Jaamacadda Hodges waa mid gaar loo leeyahay, oo aan faa'iido doon ahayn, jaamacad gobol laga aqoonsan yahay oo ku taal koonfurta-galbeed ee Florida taas oo ugu horreyn u adeegta ardayda qaangaarka ah.
Hodges Report Annual Security (Clery Act Information and Policy) iyo Xogta Dembiyada waxaa laga heli karaa: Bogga Macluumaadka Macaamiisha. Warbixinta amniga waxay sharraxeysaa Hodges Annual Plan Security iyo warbixinta Xogta Dembiyada waxaa ku taxan tirada iyo noocyada dambiyada laga galo ama ka agdhow xerada sannad kasta.
Ilaa iyo inta Xeerka Badbaadinta Xogta Guud ("GDPR") ay aniga aniga khuseyso, waxaan halkan ku oggolaanayaa in la socodsiiyo Xogteyda Shakhsi ahaaneed sida lagu qeexay GDPR ujeeddooyinka la tilmaamay oo lagu bixiyay siyaasadaha Hodges, ee lagu beddelay waqti ka waqtiga. Waxaan fahansanahay in xaaladaha qaarkood, aan xaq u leeyahay inaan diido ka shaqeynta Xogteyda Shakhsiyeed. Waxaan sii fahmay inaan xaq u leeyahay inaan codsado (1) helitaanka Xogta Shakhsiyeed; (2) sixitaanka khaladaadka ama khaladaadka iyo / ama tirtirka Xogta Shakhsiyeed; (3) in Hodges xaddido ka shaqeynta Xogtayda Shakhsiyeed; iyo (4) in Hodges ay siiso Xogtayda Shakhsi ahaaneed markii la iga codsado qaab la qaadan karo.